ခေါင်းပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်သွားတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုအရေးပေါ် ပြုစုကြမလဲ။ ။ - Hello Sayarwon
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ 10/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ကိုယ်ခန္ဓာ ထိခိုက်တာတွေထဲမှာမှ ခေါင်းကို ထိခိုက်တာဟာ အစိုးရိမ်ရဆုံးနဲ့ အရေးအကြီးဆုံး သတိထားရမယ့် အရာဆိုတာ အားလုံသိကြမှာပါ။ တစ်ခြားနေရာတွေသ ာသွေးထွက်သံယိုဖြစ်ရင် တန်းသိရပေမယ့် ခေါင်းဆိုတဲ့ မာလာခွံထဲမှာ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ ဘယ်သူမှ မြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ ပြီးတော့ ဦးနှောက်ဆိုတာ လုံးဝကို အနုစိတ် အကျဆုံး ကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်းဆိုတော့ သူ့မှာ တစ်ခုခု ဖြစ်တာနဲ့ ကျန်းမရေးကိ ုတောက်လျှောက်ထိမှာလေ။ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူက သတိမေ့သွားတာမျိုး လုံးဝ ခေါ်လို့ မရတော့တာမျိုးတွေက များတယ်ဆိုတော့ သူတို့ ခံစားနေရတာကိုလည်း ပြောမပြနိုင်။ ဘာဖြစ်နေမှန်းလည်းမသိဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အသက်က ဘေးပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေ အပေါ်မှာပဲ မူတည်နေတော့တာပေါ့။ ကဲဒီတော့ကိုယ့်အနီးအနားတစ်ဝိုက်မှာ ဖြစ်ဖြစ် မိသားစုသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ယောက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိခိုက်တဲ့ ဒဏ်ရာရလာပြီဆိုရင် ဘယ်လို အရေးပေါ် ပြုစုရမလဲ ။. ။
( ၁ ) လူနာကို အရင်တစ်ချက်ကြည့်ပါ။
လူနာက သတိရနေလား သတိမရှိတော့ဘူးလားဆိုတာနဲ့ ခေါင်းထိခိုက်တဲ့ဒဏ်ရာ ပြင်းထန်မှုကို ခွဲရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိရနေသေးရင်တော့ ပေါ့ဆနေလို့ မရပါဘူး။ ဦးနှောက်တွင်းပိုင်းမှာ သွေးတဖြည်းဖြည်းစိမ့်တာမျိုးတွေ ရှိတတ်သေးတာကြောင့်ပါ။ ဒီတော့ ခုပြောပြမယ့်အချက်တွေ ရှိရင် အရေးပေါ် လူနာတင်ကားခေါ်ဖို့အတွက် လုံးဝကို သတိရှိဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
လူကြီး ။ ။
• သတိလစ်နေရင်တော့ သေချာပါတယ် ဒါအရေးပေါ်ပါ.။
• သတိရနေသေးရင်တော့ ခေါင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုက်နေတယ် စိတ်နဲလူနဲ့လည်းမကပ်ဘူး ခေါ်ရင်ပြန်သာထူးနေတယ် တိတိကျကျရေရေရာရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ ဆေးရုံဆေးခန်းသွားပြဖို့လုံးဝကို လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆေးပညာမှာ lucid interval ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား ရှိသေးတာကြောင့်ပါ။
Lucid Interval ဆိုတာဘာလဲ ။ ။
Lucid Interval ဆိုတာ ဦးနှောက်အတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ထိခိုက်နေပါစေဦး Lucid Interval အချိန် အပိုင်းအခြားထဲ ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျရင် လူက လုံးဝ လူကောင်းပကတိ တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Lucid Interval က တစ်ခါကြာရင် ၁၂ နာရီလောက်ကြာတတ်တာမို့ ခေါင်းထိပြီးထားတဲ့သူတစ်ယောက် ဘယ်လောက်ပဲ သတိကပ်နေပါစေဦး Lucid Interval ထဲရောက်နေလို့များလားဆိုတာကိုထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
• နှာခေါင်းသွေးလျှံနေတာ နားထဲကနေ သွေးယိုနေတာ
• မျက်လုံးတစ်ဝိုက် ညိုနေတာ
• နားနောက်ပိုင်းမှာ ညိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတွေ့ရတာ
• လမ်းလုံးဝ ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တာ
• လက်တွေ ခြေတွေ ကောင်းကောင်းမမြှောက်နိုင် အားမစိုက်နိုင်တောတ့ာ
• သတိလစ်ပြီး တက်သလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းဆေးရုံ ဆေးခန်းဆီသွားဖို့လိုနေပါပြီ။ ဒါတွေက ဦးနှောက်တွင်း သွေးယိုစိမ့်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါ။
ကလေး တွေ ခေါင်းထိတဲ့အခါမျိုးမှာရော ဘာတွေလုပ်ပေးကြမလဲ။
လူကြီးတွေမှာ ခေါင်းထိတဲ့အခါ တောင် ဒီလောက်စိုးရိမ်ရတာ နုနယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေဆို ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဒီတော့ ကလေးတွေ ခေါင်းထိသွားတဲအ့ခါ ဘယ်လိုအရေးပေါ် ပြုစုကြမလဲ။
• လူကြီးတွေလိုပဲ အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အချက်တွေ ရှိနေပြီဆိုရင် ဆေးခန်းအမြန်ပြေးဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
နောက်ပြီး ခေါင်းထိထားတာ ကြာနေပြီဆိုပေမယ့်
• ကလေးက တောက်လျှောက်ကြီး အငိုမတိတ်တဲ့အခါမျိုးတွေ
• ကလေးငယ်ထိပ်လေးက ဖောင်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေနဲ့
• တောက်လျှောက်အန်နေတဲ့အခါမျိုးတွေဆိုရင် စိုးရိမ်ရတာမို့ ဆရာဝန်ဆီအတတ်နိုင်ဆုံး သွားပြဖို့လိုပါတယ်။
သိပ်ပြီး အရေးတကြီး ဆေးရုံ ဆေးခန်းပြေးစရာမလိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတေ့ာ ဒီလို လေးတွေ ပြုစုပေးလို့ရပါတယ်။
• ခေါင်းထိထားတဲ့လူကို ငြိမ်ငြိမ်လေးပေးနားလိုက်ပါ။ – ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ ရောက်မလာချင်အထိတော့ ဒဏ်ရာရထားတဲ့လူနာကို လှဲလျောင်းထားခိုင်းပြီး ခေါင်းနဲ့ ပခုံးကို အနည်းငယ်မြင့်မြင့်ထားလိုက်ပါ။
• လူနာကိုလုံးဝ မလှုပ်ခိုင်းပါနဲ့ အငြိမ်လေးပဲ ထားပါ။ အထူးသဖြင့် လူနာရဲ့ လည်ပင်းကိုလုံးဝ မလှုပ်ခိုင်းပါနဲ့။
• ဆိုင်ကယ်တွေ ဘာတွေ မှောက်လို့ ဦးထုတ်ဝတ်လိုက်သားချည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင် ဦးထုတ်ကိုလုံးဝ အတင်းမချွတ်လိုက်ပါနဲ့။
• သွေးထွက်နေတဲ့အချိန် သွေးတိတ်အောင်လို့ သန့်ရှင်းတဲ့ အဝတ်နဲ့ သွေးထွက်နေတဲ့နေရာကို တိတ်အောင် ဖိထားပေးပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ခေါင်းကွဲတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ သွေးတိတ်အောင် အနာတည့်တည့် အားနဲ့ ဖိထားတာမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။
• လူနာတင်ယာဉ်ကားစောင့်နေစဉ် စောင့်ကြည့်နေရမှာကတော့ လူနာရဲ့ သတိအခြေအနေနဲ့ အသက်ရှူမှုပုံစံတွေပါ။ အသက်လုံးဝ မရှူတော့ဘူး၊ နှလုံးမခုန်တော့ဘူး ဆိုရင်တော့ CPR လုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ခေါင်းကိုထိထားတဲ့ လူနာတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့အခါ လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းတွေ အကြောင်းပါ။ ။